Home Wararka Ciyaaraha Harry Kane oo doonaya inuu kula midoobo Mauricio Pochettino kooxda Paris Saint-Germain.
Harry Kane ayaa lagu soo waramayaa inuu u cadeeyay wakiiladiisa inuu u furan yahay inuu u dhaqaaqo dibedda xagaagan, iyadoo Paris Saint-Germain ay u muuqato kooxaha xiiseenaya
Weeraryahankan ayaa u sheegay kooxda Tottenham Hotspur inuu doonayo inuu raadsado koox cusub oo uu ka helo suuqa haatan, kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Manchester City , Manchester United iyo Chelsea ayaa la sheegayaa inay doonayaan inuu u dhaqaaqo.
Kane ayaa loo maleynayaa inuu doorbidayo inuu sii joogo Premier League, laakiin sida laga soo xigtay 90min , 27 jirkaan ayaa haatan u furan fikirka inuu u dhaqaaqo koox shisheeye.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in weeraryahanka uu xiiseynayo u dhaqaaqista PSG, oo uu maamulo tababarihii hore ee Tottenham Mauricio Pochettino .
Kane – waxaa loo maleynayay inay ku qiimeeyeen Spurs aduun dhan £ 150m – wuxuu dhaliyay 33 gool wuxuuna diiwaan galiyay 17 caawin 49 kulan oo uu saftay heerka kooxeed intii lagu jiray ololihii 2020-21.
Previous articleWax ka ogoow shan halyeey oo Real Madrid aysan ixtiraamin kahor Ramos.
Next articleMaxaa ku soo kordhay Heshiiska Manchester United ee la galeyso Borussia Dortmund iyo Jadon Sancho